Professor Madhuku Vanoti Kudomwa kwaVaChiwenga Kuri paMutemo
Nyamavhuvhu 05, 2020
Kudomwa kwakaitwa mutevedzeri wemutungamiri wenyika, VaConstantino Chiwenga, kuti vave gurukota rezvehutano, kwasimudza zvakare mutauro munyika.
Vamwe vanoti mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vakatyora bumbiro remitemo yenyika pavakati VaChiwenga vava gurukota rezvehutano, vachitora basa rakasiiwa naVaObadiah Moyo, avo vakadzingwa basa mushure mekupomerwa mhosva yekuita zvehuori.
Mutauriri weMDC Alliance, Muzvare Fadzai Mahere, vanyora padandemutande ravo reTwitter vachiti zvakaitwa naVaMnangagwa zvinotyora bumbiro remitemo yenyika rinoti kana uri mutevedzeri wemutungamiri wenyika, haukwanise kudomwa kuva gurukota zvekare.
Asi mutungamiri webato reNational Constitutional Assembly, uye vari nyanzvi munyaya dzebumbiro remitemo yenyika, Muzvinafundo Lovemore Madhuku, vanoti zvakaitwa naVaMnangagwa zviri pamutemo.
VaMadhuku vanoti patori nemutongo wekatarwa neConstitutional Court unoti mutungamiri wenyika anogona kugadza vatevedzeri vake kuva makurukota emapazi ehurumende, asi vachiramba vari vatevedzeri vemutungamiri wenyika.